About ICO: Ngubani baqokelela imali ezininzi ngexesha yokuthengisa ithokheni - Blockchain News
EyoMqungu 8, 2018 admin
About ICO: Ngubani baqokelela imali ezininzi ngexesha yokuthengisa ithokheni
Kulo nyaka uphelileyo, ICO yindlela uthandwayo lokukhulisa imali. Kodwa iingcali zithi siza kubona indlela eyahlukileyo ngokupheleleyo ekuqhubeni iintengiso oluphawu 2018. Ngoku makhe ukukhumbula zeziphi iiprojekthi eqokelele imali ezininzi ngexesha ICO-maxa wambi, imizuzwana embalwa.
video – I Infrastructure Owona kwii-Aplikheyishini zokwabela abaphantsi amagunya
Engaphezulu kwe $700 million eqokelelwe. ICO usaqhubeka
Video liqonga eyaba ngababhekisi izicelo amagunya. Le uMdali eos Dan Larimer. Waziwa ngokuba nguyise BitShares, Steem, no BitUSD.
Kuyaphawuleka ukuba ababhekisi bagqiba ukuqhuba kunyuso kude kube ngoJuni 2, 2018. Kuyinto kangangexesha kwiiprojekthi ezifana. Ekupheleni kuka-Oktobha, kwi the Scale loMphehlelelo 2017 inkomfa Brock Pearce yathi ICO eos sele nomdla phantse $700 million ngo 345 iintsuku, kwaye belingelilo umda. Ngokuka Pearce, lo ICO uya kubutha ngaphezu $1 billion phambi kokuba lugqitywe.
Le iqonga nolusebenza blockchain kwi kwifomathi indlela yokusebenza yabakhi. Eyona njongo ephambili kukuphucula ukusebenza kubuchwepheshe ulwazi (akukho mda bafezeke, kunye namandla lweenkqubo ezilolu hlobo zinqongophele kuphela lokuqonda koluntu) kunye ukusombulula ingxaki scalability blockchain ngokwandisa inani labasebenzisi kwizigidi kunye isantya okunye izigidi ngomzuzwana ngamnye ngokusebenzisa ukubala parallel kunye usetyenziso lweenkcukacha. Ezi ngcinga mihle. Umsebenzi womnatha iya kuqinisekiswa yi DPoS (Ubungqina abathunywe esibondeni). Yiyo i, kuyimfuneko ukugcina sakho semali kunye imali lonke ixesha intengiselwano ukuvela kwi blockchain. Ukuba inani lino-eziphathekayo ayikwazi kubonelelwa ngoku, kodwa akuba ngokuhlalutywa umgaqo kwemigodi POS, kucacile ukuba imali baninzi esandleni sakho, amathuba angaphezulu kufuneka ufumane ibhloko. Le ndlela kubonakaliswa kakuhle kwi network yoluntu Steemit, apho ixesha avareji ukuqinisekisa bethenga isibini esitshatileyo lemizuzwana.
FileCoin – A Market amagunya for Storage Data
$257 million eqokelelwe
FileCoin kuyinto inethiwekhi amagunya kwi blockchain esisesayo ukugcinwa data kunye nokusebenza. Umgaqo imisebenzi yomnatha onokuthelekiswa nemigodi; umahluko kuphela inkundla kwemigodi. Abasebenzisi ukunika ufikelelo yokugcina babo ngenxa FileCoins.
Kukho iindlela ezimbini zokusebenzisa i network:
Abathengi bathenga yokugcina ilifu okanye ukucela ingcaciso eyimfuneko evela mgodini kwi network aze ahlawule iinkonzo ne FileCoins.
Emigodini ukunikeza abasebenzisi ukufikelela yokugcina kwabo FileCoins.
FileCoin uye okhuphisana ezifana Storj and Sia. Le projekthi lokuqala isekelwe Ethereum kwaye iingxaki kunye scalability, kwaye eyesibini kakhulu kade ngokunjalo. FileCoin isebenzisa kwinethiwekhi yayo neminqophiso ukusebenzisana kunye nabasebenzisi kunye idatha yazo.
Tezos – A New Digital Commonwealth
$232 million eqokelelwe
Tezos yinkqubo self-ezilawulwa omtsha amagunya blockchain ukuba kudala uluntu digital lokwenene. Ithekhnoloji kube lula yokuqinisekisa esesikweni, leyo ngokwezibalo kubonisa ukuchaneka imisebenzi ikhowudi ulawuleko yaye kwandisa ukhuseleko zemvumelwano ebuthathaka okanye kufakwe imali smart.
Ngamanye amazwi, ababhekisi phambili singenise indlela Ethereum ndibhengeze kukhululwe zeprotocol ezintsha ezikhethekileyo ukusebenza izivumelwano ekhuselekileyo smart. Le nkqubo ijolise ekuzalisekiseni imisebenzi esisiseko, ezifana elubala, yokhuseleko, kunye nesantya umsebenzi. Ulwimi lwakhe zeekhontrakthi smart, ebizwa Michelson, inikeza inkqubo esesikweni ukuqinisekiswa phantsi kumthetho-siseko wokuba esetyenziswa kushishino lweenqwelo i.
Ngaphandle ICO ngempumelelo, iprojekthi namanje kanye ekuqaleni yophuhliso yayo ngenxa ingxabano ethile yangaphakathi. Wabaseki inkampani uzithathile balwa umongameli we-mali Swiss, owawusiza izimali, kunye nabatyali-mali nangoku elinde iimpawu zazo. Ngoxa abantu abaninzi ngumonde sele bafaka kumangala eziliqela ngokuchasene projekthi.
Bancor – Kwamatyala Network ezoba
$150 million eqokelelwe
Bancor kuyinto inethiwekhi amagunya ukuba ikuvumela ukugcina Ethereum izibonakaliso ngokulula eyiguqula ibe naziphi na ezinye iimpawu ngaphandle amaqela esithathu ngexabiso kubalwa ngokuzenzekelayo usebenzisa isipaji web elula.
Isiseko yale projekthi izivumelwano smart kunye nokuphucula kwase inethweki Ethereum ukuba wayanana ukuyanana iimpawu ukuba udluliselwe Exchange cryptocurrency. Kuyinto fast, ethembekileyo, yaye, eyona nto ibalulekileyo, ekhuselekileyo. Cimbi lwenziwa ngoncedo kwezivumelwano smart. “Magic axhomekeke izibalo kunye indlela elula ukuba uthenga yaye uthengisa ngendlela yokuba amatyala njalo imakethi zigcinwe nokuba imiqulu zikuluhlu exchange,” developers uchaze.
Iimpumelelo yenkampani ngaphezu 50 iiprojekthi ithokheni, kubandakanya Power Ledger, wax Token, INGQIQO, kunye nabanye. sele ujoyine inethiwekhi Bancor. sele iiprojekthi iqabane abasithoba isebenze iimpawu zabo kwaye ukuthenga nokuthengisa kubo ngokusebenzisa isicelo Bancor. ngaphandle BNT (Bancor Network Token), isicelo isekela ETH, GNO, ENJ, BMC, IND, STX, Wish, no IQT. Ngoncedo kwezivumelwano smart, inethiwekhi eziguqulelwe 20.7 million BNT ($58 million kwi-avareji izinga Bancor).
isimo – I Ethereum Mobile OS
$100 million eqokelelwe
It is a ecosystem entsha ngokupheleleyo izicelo amagunya (DApps), obonelela abasebenzisi kunye ujongano elula ngokusebenzisa le nkqubo kwakunye nabanye abasebenzisi kweqonga. Ngaphezu, inkqubo ingadala ngokuzimeleyo ukwenza imisebenzi semali, i browser, kanye ingxoxo. Iyamangalisa indlela ekwabelwana ngayo amagunya kwaye, ke, ekhuselekileyo fast.
Loo nto inika umdla abasunguli ukubheja kuluntu kuphuhliso yeprojekthi. Yiyo i, ababhekisi phambili ukunika ithuba lokuba umnini imiqondiso ezingingqini zabo ukuba bathathe inxaxheba ekwenzeni izigqibo zophuhliso projekthi nangona lo mgaqo ICO kubonisa ukungabikho malungelo.
Zininzi izicelo amagunya sele ibhaliswe Status, kuquka Gnosis naseAragon.
Gnosis (250,000 ETH eqokelelwe) liqonga eyaba ukuba iingqikelelo. Njengokuba, uqikelelo kungenziwa ezijolise exoxa nabantu abaziwayo, iingxoxo journalistic, pre-Ifandesi ixabiso imisebenzi yobugcisa, ukubheja, etc.
TenX – Guqula kunye Chitha zezimali Virtual. uPhuculo lwalo Naliphi ixesha. kuphi
$83,1 million eqokelelwe
inkampani Singapore yentlawulo izama ukwenza ukusetyenziswa cryptocurrencies njengoko lula kwaye kulula nokusetyenziswa ezimali eyake. ke, bafumana imvume evela Visa kunye MasterCard wakhutshwa ikhadi zeplastiki ezabo. Iindleko ukukhupha ikhadi $15, kodwa ingayalela version yayo virtual kwi website esemthethweni ngokunjalo. Le nkampani ithembisa Imirhumo ikomishini ephantsi ngokusebenzisa inkonzo ukuba iindleko kwi ekhadi ngaphantsi kwe $1,000 ngonyaka ngamnye. Ukuba iindleko kwi khadi sidlula kulo mgangatho, imirhumo ikhomishini akayi kuhlawuliswa.
Kule mihla, le nkqubo usebenza bitcoin, ngelixa kaEtere ubatyumze sele imo beta evaliweyo. Inkxaso ERC20 iimpawu oluqhelekileyo waphawula, nto leyo ethetha ukuba ayahambisana DGX, REP, TRUST, Neo, kunye nabanye. Yintoni eyona umdla kukuba uyakwazi ukuhlawula kunye nekhadi TenX kuyo nayiphi na ivenkile ukuba uyayamkela Visa and MasterCard. Le yiprojekthi ethembisa kakhulu kuxhaswa yi Vitalik Buterin.
Civic – Ecosystem Identity Secure
$33 million eqokelelwe
Civic ijolise ukwakha ecosystem iphela enikezela unikezelo kwi ulwazi oluyimfuneko kwimfuno. angala, inika ukufikelela kwiinkonzo zokungqinisisa ungubani ngokusebenzisa blockchain. Ngaloo ndlela, Civic iza kubonelela ukufikelela elula olukhuselekileyo ukuya idata yobuqu abasebenzisi 'kwaye uqinisekise ukuba bangoobani.
Umzekelo, inkampani inika nabahlali East Far ukuba bathathe inxaxheba kule draw emotweni, leyo iya kubanjwa kuphela ukuba ngabo. Ukuba ekukhuthazeni ibambisane Civic, ukuba ukuhlola ukuba bonke abathathi-nxaxheba aba abahlali kule nxalenye yelizwe.
Civic sele likhuphe isicelo platform yayo lokuzazisa digital, eyaziwa ngokuba Civic Secure Platform yesazisi (iOS version kuphela).
Aventus – B2B ithikithi Infrastructure
$18.7 million eqokelelwe
Aventus sisixhobo ukudala nokukhuthaza amatikiti iziganeko ezahlukeneyo ngendlela ekhuselekileyo neselubala. Abaququzeleli lo mcimbi ngokwabo musa ukulawula ukwabiwa amatikiti.
Le projekthi ivumela uhlaziye umgaqo lonikezelo itikiti kwiimarike eziziisekondari kwakunye ekupheliseni iintengiso ezingalawulwayo kunye nemisebenzi mthethweni enxulumene ukuthengiswa kwamatikiti. Nge isixhobo enjalo, abaququzeleli ziya kuba nako ukubeka ubuncinane kunye namaxabiso ubuninzi amatikiti esweni intshukumo wabo kwimarike zasesekondari, okwenza yonke inkqubo engafihliyo nefanelekileyo.
Ngamanye amazwi, ke inkqubo ithikithi ekhuselekileyo. Eyona njongo iphambili Aventus kukuba ukutshintsha ingqikelelo lonikezelo yamatikiti kube waye wazinabisa izinto, nto leyo eza kuvumela bawo kunye neenkqubo ezikhethekileyo ukuthengisa amatikiti iziganeko ngokuzenzekelayo ukufumana ikhomishini ngokuba.
Ngoku siza kunika ingqwalasela eyodwa iiprojekthi eziliqela ngempumelelo Russian ICO.
MobileGo – YeSibini Gaming Revolution Iyeza
$53 million eqokelelwe
Broadband ukufikelela Internet iye yatshintsha kwihlabathi imidlalo. amaphulo Single bayandidika, kunye nabadlali bafuna ukuba bakhuphisane ngexesha real. Ithekhinoloji blockchain uya kwenza mbuso yokudlala yabadlali: Ngoku Ukhuphiswano cybersport ziya kufumaneka kubo bonke. Oku sele ifumaneka nge ithokheni smart MobileGo, nto leyo eza kuvumela izigidi abadlali ehlabathini lonke limanyane kwiitumente amagunya kwaye P2P matches.
Ukuze wakubeka ngqo, ababhekisi ufuna ukwandisa imida iziganeko e-ezemidlalo, nto leyo eza kuvumela ukuba bonke abadlali inxaxheba kukhuphiswano ngokulinganayo. Abadlali uya kuvuzwa impumelelo ezithile ngamabhaso cash.
Center Mining Russian – Mining Multicellular
$43 million eqokelelwe
I-Russian Inkampani ephethe luqalisa amaziko lwezemigodi eRashiya, kuphuhliswa mgodini unique eziphambili, ebizwa Multiclet, bathele Sunrise mgodini.
Eyona ukuphumelela ingcamango yale projekthi ukudala wasemgodini ".GOKO-resistant" eziya am cryptocurrency, umzekelo, Ethereum, izihlandlo eziliqela ngokufanelekileyo ngaphezu amakhadi yemizobo usebenzise imali encinci wamandla. izikhombisi ezinjalo ziyilelwe ukuba ziphunyezwe ngokusebenzisa uphuhliso kumqhubekekisi multicellular, eziza zisekelwe kumgaqo efanayo becomputing bahambisa chip ikhadi yemizobo.
Kule mihla, inkampani usinika Sunrise ASICs nge chips Bitfury angaphandle. Uphuhliso lwe computing iprosesa zasekhaya ziya kuthatha malunga ngonyaka. Le projekthi ingaqatshelwa revolution Russian olufunekayo ekuxhamleni kwimigodi.
INS Ecosystem – Le Industry sokudla, kwakhiwe
$42.1 million eqokelelwe
Le qalisa lo ecosystem amagunya jikelele kuqala esithungelanayo nabavelisi ukutya kunye nabathengi ngqo.
Injongo kukuba abathengi angasebenzisana umvelisi ngqo, abathengisi udluliselwe kunye nezinye abalamleli ezingenako ilawulwe ngokupheleleyo. Abathengisi badla bawasebenzisa amandla lweentengiso: ke kwentengo amaxabiso ifihlakale abarhwebi ezincinane. It is a ingxaki eziqhelekileyo ingasombululwa ne INS Ecosystem.
SONM – Universal Inkungu Supercomputer
$42 million eqokelelwe
Le projekthi imele ingqiqo supercomputer amagunya jikelele ukuze enkungwini computing. Le ezoba operating system eqongeni Ethereum inoxanduva lokuphunyezwa imisebenzi computing nezakhono. Le nkqubo iqhekeza ekhethekileyo-software ukuba idibanise amawaka okanye kwizigidi iikhompyutha ehlabathini lonke ibe kwinethiwekhi ikhompyutha eyodwa. Oku kuza kwenza kube lula ukufezekisa iziphumo irekhodi-ligqobha naluphi na uhlobo ikhompyutha nezintsonkothe, nokuba ukubala inani molecule e isiqwenga DNA amayeza, okanye uphononongo indawo elikude, okanye ufuna uhlobo olutsha eziphilayo emhlabeni kunye nezinye iiplanethi.
Imali ezininzi ngexesha yokuthengisa ithokheni
A umthombo decenter.org
NYC exchange Genesis ...
awuthathi Korean uceba ukwenza ...
Post Previous:iza kutshintsha njani ICO Market ngo 2018?
Post Next:Blockchain News 8 EyoMqungu 2018